Guddoomiyaha Gobolka Ayhan ayaa Booqday Sivas Ankara Goob Tareenka Xawaaraha Sare ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGuddoomiye Ayhan wuxuu booqday Sivas Ankara Site Train Site Speed ​​Speed ​​Site
13 / 11 / 2019 06 Ankara, 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
gudoomiye ayhan sivas ankara tareen xawaare sare ku socda ayaa booqday goobta
Guddoomiye Ayhan wuxuu booqday Saldhigga Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Sivas Ankara; Sivas ee daraasadaha socda iyo qorsheynta si loo baaro, adeegyada dadweynaha ee loogu talagalay waxtarka muwaadiniinta sida ugu wanaagsan ee loogu soo bandhigi karo Guddoomiyaha Sivas Salih Ayhan iyo wakiillada hay'adaha la xiriira, ayaa booqday degmada iyada oo lafiirinayo xiriirada degmada Yıldızeli.
Barnaamijyada Yıldızeli ee ka socda Gobolka Salih Ayhan, Guddoomiyaha Difaaca Qaranka ee baarlamaanka Sivas kuxigeenka Ismet Yilmaz iyo Mehmet Habib Soluk iyo duqa magaalada Sivas Hilmi Bilgin, ayaa booqashada tacsida ee qoyska u rajeeyay tacsi.
Markaa Ayhan Yıldızeli Badhasaabka Furkan Atalik xafiiskiisa si uu u booqdo, sababtuna tahay bilowga cusub ee Gudoomiyaha Degmadu Atalık'ı wuxuu rajaynayaa inuu soo fiicnaado. Badhasaabka Ayhan, Yıldızeli'nin oo ah raasamaal baniaadamka oo leh karti horumarineed, isagoo sheegay inuu guul u rajeynayo Guddoomiyaha Atalık'a.
Goor dambe degmada Batman Hasankeyf 1991 waxay gashay shahiidnimada iyadoo ay ugu wacan tahay isku dhac ay la galeen argagixisadii gudaha u gashay gendarmerie Private Kadir Atesoglu Yildizeli wuxuu booqday aabihiis Caanood Ayhan, isagoo u rajeeyay nolol caafimaad iyo nabad qabta ehelka shahiiday inuu siiyo calanka Turkiga.
Marka loo eego booqashada xarumaha waxbarashada, ayuu Guddoomiyaha Degmada Yildizeli Salih Ayhan, oo aaday Dugsiga Sare ee Ataturk, booqday fasalada oo uu la kulmay ardayda. Gudoomiyaheena Ayhan, oo lagu wargaliyay heerka waxbarasho ee iskuulka, ayaa lahadlay tababarayaasha wuxuuna dhagaystay dalabkooda iyo talooyinkooda.
Kadib tuulada Kavak Zeki - Guddoomiyaha Dugsiga Sare ee Seyfi Sahin Ayhan, macallimiinta iyo ardayda ayaa isu yimid. Guddoomiye Ayhan wuxuu booqday fasalada 8A iyo 8B wuxuuna yidhi, “Waa waajibkayaga ugu muhiimsan inaanu kuu diyaarinno mustaqbalka. Waxaan aaminsanahay inaan dhammaanteen guuleysan doono. ”
Barnaamijyada degmada Yildizeli waxay ka kooban tahay casuumad ay u fidinayaan dadka deggan tuulada Guddoomiyaha Kavak Salih Ayhan, bulshada tuulada hasbihal in muddo ah. Guddoomiye Ayhan wuxuu dhagaystay dhibaatooyinka iyo dalabaadka dadka reer guuraaga ah.
Ugu dambeyntiina, qandho ayaa ka sii socota khadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Sivas Ankara ee ku yaal goobta dhismaha wuxuu booqday Guddoomiyaha Yavuz Yildizeli Ayhan, shirkadda qandaraaslaha ah B. Ergunler AS mas'uuliyiinta waxay heleen macluumaad ku saabsan shaqada.
Xildhibaannada Xisbiga AK-ga ayaa booqday Goobta Isgaadhsiinta ee High-Speed ​​Train Bursa-Yenisehir
Ankara Sivas xarumaha xawaaraha sare
Ankara Sivas si dhakhso ah tareenka
Xaaladda ugu dambeysay ee mashruuca tareenka ee xawaaraha sare ee Ankara Sivas